I-GoDaddy ibanga uphawu lwentengiso ngolwaphulo-mthetho kwi-Go-Daddy domain ethengwe kwiGoDaddy | Martech Zone
I-GoDaddy ibanga uphawu lwentengiso ngolwaphulo-mthetho lwe-Go-Daddy ethengiweyo kwiGoDaddy
NgoLwesihlanu, Agasti 24, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Namhlanje ndifumene umnxeba ovela emadodeni azibuza ngobudlelwane bam neNoDaddy.com, indawo eyonwabela iGoDaddy ngenxa yeshishini layo.
Emva kokuba ndithethile noJohn, ndandimangalisiwe koko kwenzekayo kuye. UJohn uthenge i-Go-DADDY-DOMAINS.COM kunye ne-Go-DADDY-DOMAIN.COM ukusuka… ngubani omnye… GoDaddy.com. Andiqinisekanga nokuba uJohn wayemangalisiwe kusini na ukuba akwazi ukuthenga iindawo, kodwa mna!
Ukuba uyazibuza ukuba uJohn ungumntu ohleli ecaleni okanye uzama ukusebenzisa iGoDaddy, andikholelwa njalo. Wayesazi ukuba likho ithuba lokuthenga le mimandla, kodwa andiqondi ukuba injongo yakhe yayingendawo. Ukuthetha noJohn emnxebeni, ndiziva ngathi akayazi le mveliso ngaphakathi nangaphandle, wabona nje ithuba kwaye walitsiba.
Kulapho iba nomdla khona:
Kuthunyelwe: NgoLwesibini, Agasti 21, 2007 1:08:25 PM
Isihloko: GO-DADDY-DOMAINS.COM kunye neGo-DADDY-DOMAIN.COM Ukophulwa kophawu lwentengiso
Kufikile kuthi ukuba amagama amabini e-domain obhalisileyo ayaphula uphawu olunye okanye nangaphezulu kwiimpawu zorhwebo zeGoDaddy.com.
Njengoko unokwazi, i-GoDaddy.com luphawu lwentengiso olubhalisiweyo lweGoDaddy.com. Sibhala njengentlonipho ukukwazisa ukuba ukusebenzisa kwakho igama elithi "Go Daddy" kwigama lakho lommandla okanye igama lesizinda elifana nqo e okanye elibhidanisayo elifana nophawu "Go Daddy" kusenokubangela ukudideka kwi kwindawo yentengiso kwaye ke kuya kuthi kuthathwe njengokuphula umthetho wentengiso yeGoDaddy.com.
Ngenxa yoko, singathanda ukukubuyisela imali ngokuthenga kwakho le mimandla kwaye uhambise loo mimandla kwiakhawunti yethu.
Nceda ubenobubele ukuqala inguquko yeakhawunti kule dilesi ye-imeyile kwithuba leentsuku ezili-10. Ukuba unemibuzo ngale nkqubo, nceda unxibelelane nam ngokuphendula kule imeyile.
Ke ngoku uGoDaddy, othengise iindawo nguJohn, ngoku ulandela uJohn ngolwaphulo mthetho ?! Khawufane ucinge !? Ndingaba novelwano ukuba uJohn uthenge i-domain kwi Idols… Kodwa uGoDaddy wayithengisa kuye !!! Kufana nokungena kwi-Starbucks, ukuphuma nekomityi yekofu kwaye emva koko woyikiswa yi-Starbucks yokuba ngumnikazi wekofu.
Iintloni kwiGoDaddy. Kuyahlekisa ukuba khange bathathe amanyathelo afanelekileyo a) ukubhalisa ezinye iindawo okanye b) ubuncinci babeke ibhloko kwinkonzo yabo ukuze bangazithengisi ngokwabo. Ndiqinisekile ukuba I-GoDaddy ayithengisi nge-boobs kuphela, Ziqhutywa ngamabhulu ngokunjalo.
Ukuba uyazi igqwetha elilungileyo elinokunceda uJohn ngaphandle, nceda uphawule kule bhlog ngolwazi oluthile lokunxibelelana. UJohn uza kufunda amagqabantshintshi.
tags: copyrightthambekahamba-utatagodaddyukophula umthethonodaddyuphawu
Iimfazwe zesikhangeli: I-Internet Explorer iyaqhubeka nokuLahla kwiFirefox, yeyiphi iSafari?
Ukuthengisa ngokuthe ngqo kutshintshile-Ayisiyiyo iMithetho yama-40/40/20
Agasti 25, 2007 kwi-12: 31 AM
Ukhetha ntoni uDotster kwezi ntsuku?
Agasti 25, 2007 kwi-10: 31 AM
Ndisoloko ndicinga ukuba uDotster wayengumbhalisi obalaseleyo wesizinda- izixhobo zangasemva zazingcono kakhulu kuneGoDaddy. Ndiyakholelwa ukuba iGoDaddy iphumelele kwicala lentengiso, nangona kunjalo.
Uninzi lwabantu lucinga ukuba zonke iiapps ziyafana de umntu uhlalutya izivumelwano zomsebenzisi. UDotster akasokuze aphazamisane neakhawunti yakho ngaphandle kokuba banyanzelwe ngokusemthethweni.
I-Dotster ifrize isizinda sam godaddysgirls.com kwaye ngoku i-WIPO iyayilawula ide iphazamiseke. Ukuba kukho umntu onokundinceda undazise.
Agasti 25, 2007 kwi-10: 52 AM
Andisiqondi ukuba kutheni abantu besayithemba iGoDaddy…
Ngomhla wama-31 ku-Disemba 2008 ngo-1: 06 PM
Ndilungiselele amagama athile e-domain kwaye ndawashiya ukuba athenge kamva kwaye u-Go daddy wabamba kwaye wabhalisa phantsi kwegama labo.
UTsi yimini yokuphanga emini. UJohn unganikezeli !!
Agasti 26, 2007 ngo-9: 11 PM
Andazi naliphi na igqwetha, kodwa ndiyazi iibhloko ezimbini ezinokuba nomdla kweli bali
Banokwazi ngamadudusi asemthethweni okunceda.
(Bendingayazi yonke le nto malunga neGoDaddy- kulapho bendithenga khona zonke iindawo zam !!! Grrr)
Agasti 26, 2007 ngo-9: 30 PM
Enkosi ngala makhonkco eNathania! Ndilihambisile ibali kuzo zombini ezo ndawo. Ngokuphathelele iakhawunti yakho yeGoDaddy, unokuhlala ulinde de baphelelwe lixesha kwaye emva koko ubathumele. Dotster ngesiqhelo kudluliswa isaphulelo.
Ndiyayixabisa inyani yokuba kuphela kwabo babhalisi besizinda ifuna iphepha elisemthethweni ngaphambi kokuba benze nantoni na kumthengi.
Agasti 26, 2007 ngo-10: 35 PM
Enkosi ngesikhombisi kwigama lendawo Iindaba zeNathania. Ndiyamangaliswa kukuba uGodaddy engakhange eze emva kweNoDaddy.com ngokunjalo.
U-Godaddy eneneni unayo kwi-TOS yakhe into enokuthi yenziwe ngumnini wesizinda ukuba ahlawule naliphi na inyathelo lomthetho (njenge-UDRP) elethwe ngo-godaddy. Ke ndiyazibuza ukuba ingaba lo mntu kwafuneka ahlawule loo nto naye? Okanye kuba iphathwe ngo-godaddy ngaphakathi mhlawumbi bayigqithile loo mali. 🙂
Yonke le nto ikhangeleka ingenabungozi kumacala omabini. Umfana wenza impazamo. U-Godaddy umthumelela i-imeyile kwaye amxelele njalo kwaye unikezela ukumbuyisela imali yakhe. Kuya kufuneka athathe imali ayibuyise ahambe. Akukho monakalo. Akukho Nto iphosakeleyo. Ngapha koko zii-2cents zam kule. Ufanele awuthathe umnikelo wemali yakhe abe yintsikelelo. . . ngoku angaya kubhalisa amanye amagama angcono.
Ukuthetha ngo-godaddy kunye ne-dotster. UFrank (owam we-2 wokuyalela kwigama lendaba iindaba) ubhale esi siqwenga sikhanyisa ukukhanya kuzo zombini iinkampani.
Okokugqibela, njengamagqwetha (ukuba kunyanzelekile ukuba uzihluphe.. Unokujonga kuJohn Berryhill (johnberryhill.com) okanye kwiAri Goldberger (esqwire.com) okanye kuPaul Keating (renovaltd.com) phakathi kwabanye abaninzi. Ukuba ugoogle amagama abo uya kufumana ulwazi oluthe kratya kwimpumelelo yabo ekusingatheni la matyala. Ndiyarhana ukuba bazothetha into efanayo nale ndiyicebisileyo. Nika amagama emva. Buyisela imali yakho. Qhubeka uthenge amagama ambalwa angcono kubhaliso olwahlukileyo 😉
Agasti 27, 2007 kwi-5: 52 AM
Enkosi ngokuthatha ixesha kunye nokubhala impendulo eyoyikekayo!
Novemba 1, 2007 ngo-1: 34 PM
Oku kunomdla kakhulu. Ndine-rackdaddy.com kunye ne-rackdaddy.net ukusukela ngo-2001. Bobabini babhaliswe kwirejista eyahlukileyo, hayi iGoDaddy.Com. Ndityikitye kwangoko kulo nyaka kwinkqubo yokubambisana yeGoDaddy.Com kwaye zombini imimandla iphinda iqonde ngqo kwiiseva zazo. Ngokusisiseko ukwenza iGoDaddy.Com iqabane lam kwishishini kweli phulo.
Namhlanje ndinefom ye-imeyile evela kuGoDaddy.Com kunye noku kulandelayo emzimbeni:
Ngale ndlela sinyanzelisa ukuba uyeke kwangoko: uyeke ukusebenzisa kwakho le mimandla ngokungagunyaziswanga, urhoxise ukuthunyelwa kwala magama; kwaye ugqithisele amagama e-domain kwiGoDaddy.com ngo-Novemba 16, 2007.
Ndiyazibuza ukuba loluphi uphawu lwentengiso abaya kubhekisa kulo, njengoko ndithandabuza ukuba kunganzima ukuba babenophawu lwentengiso kwigama? Ukuba kunjalo wonke umntwana kufuneka agcine isibonelelo sakhe ukuhlawulela ilungelo lokuthetha? Tata?…
Agasti 27, 2007 ngo-1: 44 PM
Oku kukuhlekisa kakhulu ekuboneni kuqala. Kodwa ukuba uyayijonga kakuhle, ewe, u-godaddy wenze into elungileyo. Iinjongo zikaJohn ngokuqinisekileyo yayingekokuphuhlisa into eyayingeyoGodaddy kweli gama lesizinda. Kulungile ukuba ungangeni kwiingxaki zomthetho kodwa ubuyise imali kwaye ubhukishe elinye igama lesizinda, kwaye uyigqibe.
Agasti 27, 2007 ngo-12: 52 PM
Bathi: “Singathanda ukukubuyisela imali ngokuthenga kwakho le mimandla kwaye uhambise loo mimandla kwiakhawunti yethu.” Kubonakala ngathi bafuna kodwa amagama e-domain abuyile. Mhlawumbi yayiyi-snafu e-bureaucratic kwaye bekungafanelekanga ukuba bayithengisile ukuqala kwaye ngoku bazisa imisipha yomthetho kunye nembuyiselo yokubabuyisa.
Ijongeka ngathi kukungakwazi ukusebenza kunenjongo embi.
Ikhondo lokuqala lesenzo kukufumanisa ukuba "Yiya Utata", eneneni, luphawu lwentengiso olubhalisiweyo kwaye ayisiyiyo nje isiqinisekiso sokuba unophawu lwentengiso olubhalisiweyo.
Okwesibini, ikhonkco kwi-GoDaddy.com nakweyiphi na into ekuthiwa ikhubekisa amaphepha iya kunciphisa kakhulu nayiphi na imiba eqinisekisiweyo 'yokudideka' malunga namagama wesizinda avakalayo.
Inyaniso yokuba imimandla ekhubekisayo, enyanisweni, ithengiswe yiGoDaddy iya kuba nobunzima obukhulu endaweni kaJohn. UJohn unesivumelwano kunye neGoDaddy, ekubonakala ngathi, wawarhoxisa amalungelo abo okuqinisekisa nawuphina umba wokophula umthetho kuba bathengisa (ikhontrakthi yokuthengisa) amagama ezizinda kuJohn.
Ingcebiso yam kukuthathela ingqalelo ukuthengisa imimandla ekhubekisayo ibuyele kwi-GoDaddy.com nge $ 25,000 inye.
Agasti 27, 2007 ngo-4: 02 PM
Zintathu ii-trademark ze-godaddy.com, ezi-3 zokuya kutata, kunye ne-3 zokuya kwisoftware katata. Bajonge kwindawo ye-USPTO.Gov. Ukubona njengeempawu zorhwebo zigubungela imimandla njengenkonzo, ndingacinga ukuba nakuphi na ukusetyenziswa kwemimandla GO-DADDY-DOMAINS.COM kunye neGO-DADDY-DOMAIN.COM inokuphazamisa amanqaku abo.
Kwakhona, uJohn unekhontrakthi kunye no-godaddy nakwikhontrakthi awayevumile kuyo, ithi (phakathi kwezinye izinto ezininzi)
“Hamba utata unelungelo lokukhanyela, ukurhoxisa okanye ukutshintshela nakuphi na ukubhaliswa akubona kufanelekile, ngokokubona kwakhe, ukukhusela ukuthembeka kunye nozinzo lobhaliso, ukuthobela nayiphi na imithetho esebenzayo, imigaqo karhulumente okanye iimfuno, izicelo zokunyanzeliswa komthetho , ngokuhambelana nayo nayiphi na inkqubo yokusombulula impikiswano, okanye ukunqanda naluphi na uxanduva, olungelolwaseburhulumenteni okanye lolwaphulo-mthetho, kwicala likaGo Daddy, ngokunjalo namahlakani ayo, iinkxaso-mali, amagosa, abalawuli kunye nabasebenzi. Go Daddy unelungelo lokumisa igama lommandla ngexesha lokusombulula impikiswano. ”
“Yiya Utata unelungelo lokuhlawulisa intlawulo efanelekileyo yenkonzo kwimisebenzi yezolawulo engaphaya kwemisebenzi yayo yesiqhelo. Oku kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, kwimiba yenkonzo yabathengi engenakuphathwa nge-imeyile kodwa ifuna inkonzo yobuqu, kunye neengxabano ezifuna iinkonzo zomthetho. Ezi ntlawulo ziya kuhlawulwa kwiNdlela yokuHlawula esinayo kwifayile yakho. Ungayitshintsha indlela yokuhlawula nanini na ngokungena kwiAkhawunti yakho. ”
Konke kunokubonwa xa ufunda isivumelwano ngexesha lokubhalisa (ukuba akukho mntu ufundayo ngokucacileyo) okanye kwikhonkco elingezantsi
Ingcebiso yokujonga ukuthengisa le mimandla ku-godaddy yingcebiso embi. Thatha imali yokubuyiselwa kwemali uqhubeke. Impazamo yenziwe. Isifundo esifundwayo. U-Godaddy ufunde isifundo koku nam ndiqinisekile.
Agasti 27, 2007 ngo-8: 51 PM
Ndiyamcaphukela u-godaddy. Bathathe i-domain yam kuba umntu othile wathumela imifanekiso engamanyala kodwa nomgcini wam wedatha akazange athethe nto, kodwa u-godaddy. Ukuba ubhalisile kwi-godaddy, ngokusisiseko bangabakho idilesi yakho. Bahlawulisa i-75 yeedola ukukhulula kuwe ... ishishini labo alilunganga kwaye basebenzise kakubi amandla abo.
Agasti 28, 2007 kwi-2: 12 AM
Eli ayilo bali kwaphela, kulungile ke ukuba ngu-godaddy othembekileyo ekufuneka eyithengile i-domain. Inyaniso yokuba ithengisiwe isuka ku-godaddy, nokuba yeyiphi na irejista enokuthengisa ngayo nayiphi na idomeyini iyinyani kuwe.
ukuba banikezela ukophulwa kwelungelo lokushicilela ke bakwenza oko kwizizathu ezifanelekileyo. Kulungile ndiqinisekile ukuba ngekhe azise ukukhuthaza isikipa sakhe, wayenolwazi lokuthenga idomain.
UGoDaddy uzama ukuthatha i-domain yam godaddysgirls.com kum nayo. Ndiyayiva intlungu yakho.
Yiya kwiiforum zeNODADDY.com ngoncedo oluthile.
Juni 22, 2008 ngo-3: 16 PM
UGoDaddy ube liqabane elikhulu kwishishini iminyaka eliqela.
Uxolo bafo. I-cybersquatting yeklasikhi. Akukho mfuneko-kwaye ngenene ngekhe kubekhona- ukubamba yonke typo, umahluko kunye nolwandiso lweempawu zakho zorhwebo. Ubhaliso olukhuselayo lungangumbono olungileyo kwezinye zezinto ezicacileyo, kodwa akufuneki. Kwaye i-Anti-Cybersquatting Act yenza uxanduva lwe- $ 100,000 + yobhaliso kwiimpawu zorhwebo ezaziwayo. Jonga ezi zixhobo ngolwazi oluthe kratya:
I-cybersquatting kunye neBlog yoRhwebo loRhwebo
Juni 27, 2009 ngo-7: 14 AM
Ulwazi lukaGodaddy luhle.Ndisebenzisa iSiza seGodaddy Reseler http://www.tucktail.com/ Kwigama lam loShishino lwegama loBhaliso kunye neNkqubo yoLondolozo